OS X နှင့် iOS အတွက် Safari ၏ပြသနာကိုဖြေရှင်းခြင်း။ ငါက Mac ပါ
Jordi Gimenez | | OS X ကိုအယ်လ် Capitan, လဲ tutorial
ဒီနေ့မနက်မှာငါနေ့တိုင်း Mac ကိုသုံးတော့မည်။ Safari ကိုဖွင့်ရန်ကြိုးစားသောအခါအံ့အားသင့်သွားသည်မှာ၎င်းသည် iMac တွင် double URL ပြသခြင်းနှင့် iPad ပေါ်တွင်မကြည့်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ခြင်းမရှိပဲပိတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကောင်းသောနံနက်ကတည်းကပြproblemနာကိုရှာဖွေဖို့ကြိုးစားနေခြင်းနှင့် အရာအားလုံးသည်ထင်သည်ထက်ပိုမိုရိုးရှင်းခဲ့သည်.
အကယ်၍ သင်တို့အများစုသည်ယခုအချိန်တွင်နှင့်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးကိုဖျက်ပစ်ခြင်း (သို့) ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းမပြုမီစသည်ဖြင့်သေချာသည်။ ၎င်းသည် Safari ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုခွင့်မပြုသည့် bug တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသတိပေးသည်။ သင်၏ Mac သို့မဟုတ် iPhone ပေါ်တွင်သင်၌ရှိသည့်အရာမှန်သမျှကိုမဖျက်ပါနှင့်၊ Safari ၏အကြံပြုချက်များကိုပိတ်ပါ။
ကျွန်တော့်ဖြစ်ရပ်မှာ၊ သူတို့ဟာပြdeleteနာရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထင်တဲ့ပရိုဂရမ်တချို့ကိုငါပယ်ဖျက်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်ဖြစ်ရပ်မှာပြonနာက iPad (လက်ရှိ iOS 9.2 တွင်ရှိသည်) နှင့် OS X 10.11.3 အယ်လ် Capitan -in beta 10.11.4 တွင်ရှိသည့် iMac တွင် - ကျွန်ုပ်တွင်ပြtheနာမရှိခဲ့ပါ။ တစ် ဦး ချင်းစီကတခြားထိပ်မှာနှစ်ခု URLs။ ပထမ ဦး ဆုံးကျွန်တော်စဉ်းစားမိသည်က link အချို့သည်ငါ့ကို Safari နှင့်အခြားသူများထပ်ခါတလဲလဲကွန်ယက်ပေါ်တွင်ပျံ့နှံ့နေသောဟာသထဲသို့ကျစေခြင်းဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်မဟုတ်ပါ။
OS X El Capitan 10.11.3 နှင့် iOS 9.2 တွင်ဖြေရှင်းချက်မှာ Safari ၏အကြံပြုချက်များကို settings ထဲမှပိတ်ထားရန်ဖြစ်သည်။ Mac ကိစ္စတွင်ထိုသို့ပြုလုပ်ရန် ကျနော်တို့ Safari ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် Preferences ရိုက်ထည့်ပါ။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ကဏ္ in ရှိ box ကို uncheck လုပ်ရန်သာလိုအပ်သည် ရှာဖွေရန် - Safari အကြံပြုချက်များထည့်သွင်းပါ။ ၎င်းသည် OS X El Capitan ရှိ browser ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းပေးသည်။
iOS 9.2 အတွက် - ယခုဗားရှင်းတွင် ဆက်လက်၍ မမျှော်လင့်ဘဲပိတ်ထားသောသုံးစွဲသူများ၊ လက်ရှိ iOS ဗားရှင်း 9.2.1 ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ရိုက်ထည့်ရမည် ချိန်ညှိချက်များ - Safari - နှင့် Safari ၏အကြံပြုချက်အကွက်ကိုအမှတ်ခြစ်ပါ။ ပြနာဖြေရှင်းပြီး
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac OS X ကို » OS X ကိုအယ်လ် Capitan » OS X နှင့် iOS အတွက် Safari ပြproblemနာအတွက်အဖြေ
ဖြေရှင်းချက်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်ရူးသွားပြီ၊ ပြီးတော့သူကထင်ထားတာထက်ပိုပြီးရိုးရှင်းတယ်။
Jordi ရဲ့ထည့်ဝင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဒါဟာငါ့မှာ iPhone နဲ့အတူဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်၊ မင်းပြောသမျှကိုလုပ်ပြီးဖြေရှင်းလိုက်ပြီ။
Teodosio Vargas-Machuca Barea ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ ငါဖြေရှင်းပြီးပြီ အဲဒီကွက်လပ်ကိုအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းနေသင့်ပါသလား။
Teodosio Vargas-Machuca Barea အားစာပြန်ပါ
ကောင်းပြီ၊ အခြေခံသဘောတရားအရဟုတ်ကဲ့၊ ဒါပေမဲ့ဒီသီချင်းကို Apple ကနေပြီးဖြေရှင်းမယ်၊ ငါဒီဆောင်းပါးကိုတည်းဖြတ်နေပြီလား၊
အမှန်တရားကတော့ကျွန်တော်ပြtheနာကိုမတွေ့မချင်း၊ မနက်ခင်းမှာကျွန်တော် Apple ကိုဘယ်လိုရခဲ့တာလဲ ...
ပါပလော MB ဟုသူကပြောသည်
Jordi ကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်ရိုးရှင်းပြီးထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြင့်ဖြေရှင်းပြီးသော Jordi အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Pablo MB အားစာပြန်ပါ
ပါပလော Alejandro Araujo Granda ဟုသူကပြောသည်
ထည့်သွင်းမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်အစွန်းရောက်နေပြီး Mac ကိုရူးသွားသည်။ အခုတော့အဆင်ပြေပါတယ်။ နောက်ရက်တွေမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲကြည့်ရအောင်။
ပါပလော Alejandro Araujo Granda အားပြန်လည်ပြောဆိုပါ
ငါခဏတာနေခဲ့မယ်ဆိုရင် mac air ပေါ်မှာရှိပြီးသား avast ကိုငါ activate လုပ်ပြီးနောက်မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါလုပ်နိုင်တာတစ်ခုက private window ပုံစံကိုရိုက်တာပါပဲ။
ကျေးဇူးတင်ပါသည် YOUAAAAASSS !!!!
ငါသည်ငါ့ iPhone ကနေသွားလာနိုင်ဘူး, ငါရှုပ်ထွေးခဲ့သည် ... ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်🙂
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်!! သူဟာနံနက်တိုင်း Safari ကိုရူးသွားတယ်။
ကျွန်တော်တို့ကိုဖြေရှင်းချက်ပေးခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သို့သော်ဤအရာသည်သင်ပြောသောအရာကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်ဖြစ်သော်လည်းကျန်ရှိသောပြproblemနာတစ်ခုရှိသေးသည်။ သူတစ်ပါးတို့၌ဖြစ်ပျက်မည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ iMac တွင် Safari တွင် tab အသစ်များမဖွင့်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ် tab အသစ်တစ်ခုကိုနှိပ်သောအခါအနှစ်သက်ဆုံးများနှင့်မကြာခဏလာရောက်လည်ပတ်သူများပေါ်လာသည်။ သို့သော်ထို tabs များကို ၂ ခုခွဲခြားထားသည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်လိပ်စာအသစ်တစ်ခုကိုထည့်သွင်းပါကကျွန်ုပ်အရင်ကရှိခဲ့သည့် web ကိုစွန့်ခွာ: /
ပြီးခဲ့သည့်ညက OSX El Capitan ကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးမွမ်းမံခဲ့သည်။
ပုံမှန်အလှည့် / ပိတ်နှင့်အတူ Fixed ။ အမှု၌သူတစ်စုံတစ် ဦး မှတာဝန်ထမ်းဆောင်။
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ ငါပြproblemနာကိုရူးသွပ်နေတဲ့အတွက်လမ်းကိုအရမ်းစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတဲ့စာမျက်နှာကိုသွားရှာတယ်။ ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးသို့တိုက်ရိုက်။ မင်္ဂလာပါ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !! သင်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ် ငါ system ကိုဖြိုဖျက်ရန် backup တစ်ခုလုပ်ပြီးပြီနှင့်သင်အဖြေတစ်ခုရှိစေခြင်းငှါငါ့ထံသို့ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တစ်သန်း။ ငါ3ကြိမ် rebooted !!! ဟားဟား
Hahaha ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ငါအရမ်းအပူတပြင်းဖြစ်နေတယ် ထိုအခါငါသူတို့အရူးကျွန်တော်တို့ကိုအနည်းငယ်အရူးနေကြသည်ကိုကြည့်ပါ! ပွေ့ဖက်!
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်!။ အပူတပြင်း, ငါအကြိမ်အနည်းငယ် reboot လုပ်။ , အဆုံး၌ငါ Chome download လုပ်ပါပြီ
အလို!! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!!! ငါ iphone format နဲ့ပတ်သက်။ !! ဗိုင်းရပ်စ်လို့ထင်ခဲ့တယ်
ကောင်းပြီ၊ အက်ပဲလ်၏ "၀ က်ဘ်ဆိုက်" တွင်မည်သည့်အဖြစ်အပျက်မှမပေါ်ပေါက်ခဲ့သော်လည်း၎င်းတို့သည်ဘရောင်ဇာမှတစ်ခုခုကိုထိမိပြီးပြtheနာ၏အကြောင်းရင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြနေသည်။
ဖြေရှင်းချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပြီးတာနဲ့ပုံမှန်အတိုင်းသွားနေပါပြီ။ ဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုပြန်လည်မွမ်းမံသောအခါကျွန်ုပ်တို့ယခုဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုခုပြောင်းရမလား။
ဂရိတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း fixed အလွန်အသုံးဝင်သော post ကို😉
မေးခွန်း: Safari / mozilla / etc ရှိတစ်ခုခုကိုကျွန်ုပ်ရှာဖွေသည်နှင့်ကျွန်ုပ်သည် Google မှရလဒ်များကိုယူဆောင်လာသည်နှင့်အမျှရလဒ်များလင့်များကိုနှိပ်သောအခါဘာမျှမဖြစ်လာပါ။ ဘာလဲ ????
oleeee ... ဒါအမှန်ပဲ! အဲဒါကိုဖြေရှင်းနိုင်ပုံရပေမဲ့ကျွန်တော့်ကိုပြproblemsနာတွေပေးခဲ့တယ်။ ပို့စ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !! နောက်လာမည့်အကြောင်းအရာများကိုကျွန်ုပ်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Miguel Lamberto ဟုသူကပြောသည်
ဟယ်လို။ ကောင်းပြီ၊ iPad Air2မှာ၊ ငါ့အတွက်အဲဒါကိုဖြေရှင်းရုံတင်မကဘူး၊ ဂျာမန်လိုပဲ၊ Google, Bing, Yahoo, DuckDuckGo ကိုရှာဖွေတဲ့အခါရလဒ်တွေကိုပြသပေမယ့်ငါ့မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ ပုဂ္ဂလိက browsing နှင့်ပင်လျှင်လင့်များအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ထိုအခါပြinstallနာကိုသင် install လုပ်သောအခြားဘရောက်ဇာများတွင်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ပထမ ဦး ဆုံး Desktop (Spotlight) ၏ဘယ်ဘက်တွင်တွေ့ရသော menu အသစ်ထဲတွင်ပင်။ သင်သွားလို့မရဘူး၊ ဒါကနည်းနည်းတော့စိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ်။
Miguel Lamberto အားပြန်ပြောပါ